फेरि सुरु भयो माछापुच्छ्रे आरोहण बहस
पोखरा । नेपालमा आरोहणका लागि खुला नगरिएकोमध्ये कास्कीको माछापुच्छ्रे हिमाल पनि छ । अहिलेसम्म कुमारी हिमालको नामले माछापुच्छ्रेलाई चिनिन्छ । गुरुङको धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले हिमाल आरोहणका लागि खुला नगरिएको हो । तर बेलाबखत माछापुच्छ्रे आरोहणको चर्चा चलिरहन्छ । सतहमा बहस भइरहन्छ । कोभिडअघि एक समय निकै छलफल गरेर पनि सेलाएको यो बहस फेरि सुरु भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले एउटा कार्यक्रममा हिमाल आरोहण खोल्नुपर्ने बताएपछि यसको चर्चा चुलिएको हो ।
‘हामी हिमाललाई आस्थाको रुपमा हेर्छौँ । तर यो होइन कि, यहाँ कोही जानै हुँदैन,’ उनले भने, ‘सम्मान गर्दै, आय आर्जनसँग माछापुच्छ्रेलाई जोड्नुपर्छ । हामीसँग भएको स्रोतबाट आम्दानी गर्न नसके यसको के महत्व ?’ आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको संस्था फोनिजले राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुरुङले माछापुच्छ्रेलाई पर्यटनका लागि ‘हटकेक’को रुपमा प्रस्ताव गरे । धेरै आरोहीहरू पूर्वी क्षेत्रमा भीड लागेको भन्दै माछापुच्छ्रेलाई आरोहणका लागि खुला गरेर पर्यटकको ध्यान गण्डकीमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिकाको एउटा टोलीले खुम्बु क्षेत्रको पनि अध्ययन गरेको थियो । ‘९० प्रतिशत आरोही पूर्वतिर जान्छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्रले पर्वतारोहणबाट खासै फाइदा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ ८ हजार मिटरका अग्ला मनास्लु, धवलागिरि र अन्नपूर्ण छन् । यता पर्यटक छैनन्, जबकि ८ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका खुम्बु क्षेत्रका हिमालमा आरोहीको बाक्लो भीड छ ।’ ३ दशकअघि प्रकृति विज्ञ डा. हर्क गुरुङले पनि माछापुच्छ्रे आरोहण खोल्नुपर्ने अजेन्डा ल्याएका थिए ।
तत्कालीन सांसद प्रकाशबहादुर गुरुङको पालादेखि यो छलफलमा छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पहिलो बैठकबाटै आरोहण खुला गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कार्यपालिका बैठक, गाउँसभाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर पर्यटन मन्त्रालयमा फाईल पुर्‍याइएको छ । जतिबेला पर्यटनमन्त्री कास्कीकै स्व. रवीन्द्र अधिकारी थिए । विवाद हुने डरले यो फाईल अघि बढेन ।
‘मेरो व्यक्तिगत फाइदाको कुरा होइन । समृद्धि चाहिएको हो नि । समृद्धिका लागि हामीसँग जे छ, त्यहि बेच्ने हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘मानिसलाई माछापुच्छ्रेमा चढाएर पैसा कमाउनुपर्छ । यसमै हाम्रो हीत छ ।’ वडा नम्बर १ का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङले पनि आरोहण खुलाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘गाउँपालिकामा धेरै बहस गरेर सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । अब तल्लो तहमा भन्दा माथी नै छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाका निर्णय र यसका सार विषयहरू मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ । त्यो हेरेर सरकारले निर्णय गरोस् ।’ कोभिडको समाप्तिसँगै माछापुच्छ्रे खुला गरेको सन्देश विश्व पर्यटन बजारमा पुगे धेरै छिटो नेपालको पर्यटन पुरानै अवस्थामा फर्किने उनीहरूको विश्वास छ ।
‘हिमाल जोगाउनुपर्छ । हामी पनि हिमाल नै मासेर कमनाउनुपर्छ भनेर लागेको होइन,’ उनले भने, ‘संरक्षणसहित आम्दानी भनेको हो । आरोहण खुला भए त्यहाँका नागरिकले रोजगारी पाउछन् । पर्यटकले नयाँ गन्तव्य पाउछन् । वातावरण संरक्षण पनि सँगै हुन्छ ।’ संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङले भने माछापुच्छ्रेलाई नरनारायणको प्रतिकका रुपमा चित्रित गरेका छन् । धेरैले उनको विचारलाई समर्थन गरेर आरोहण खुल्दा हुने घाटाका बारेमा व्याख्या भइरहेको छ । पोखराका केही पर्यटन व्यवसायीहरू पनि हिमाल खोल्ने पक्षमा छैनन् । माछापुच्छ्रे हेर्नका लागि मात्रै सुन्दर हुने भन्दै यसलाई देखाएर गण्डकीले अरु ब्रान्ड बेच्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
माछापुच्छ्रेमा पहिलो पटक सन् १९५७ मा बेलायती सेनाका कर्णेल जीम्मी रोवर्टसले आरोहण गरेको बताइन्छ । उनीहरुले घाचोक क्षेत्रबाट चढ्न नपाएपछि उत्तरी क्षेत्रबाट आरोहण गरेको बताइँदै आएको छ ।
गण्डकीमा अनौठो दृष्य, सबै पार्टीको सहमतिमा सभापति चयन
मिडिया विधेयकको चौतर्फी विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग
नवलपुरको पोल्टामा गण्डकीको राजनीति, सांसदपिच्छे पद
पोखराका पर्यटकीय स्थल खोल्न सामूहिक प्रयास
विद्यालय प्रांगणमै शिक्षकको हत्या
प्रदेशसभामा पेस भयाे आमसञ्चार विधेयक
प्रदेश सांसदले मागे मनाङेको सम्पत्ति विवरण
जमिनमा कङ्क्रिट, छतमा तरकारी